काठमाडौंको कर्णाली- कोपिला - कान्तिपुर समाचार
विद्यालयका लागि डेस्कबेन्च र शैक्षिक सामग्री किन्न तीन दिन नाटक मञ्चन
श्रावण १३, २०७५ सुनीता साखकर्मी
काठमाडौँ — काठमाडौंमा कर्णाली नदी छैन । तर सेवासुविधाका दृष्टिले कर्णालीकै झल्को दिने ग्रामीण बस्ती भने अझै छन् । त्यस्ता बस्तीमा विकासका आधारभूत सेवा पुग्न सकेको छैन । साँखुबाट केही माथि उक्लिनेबित्तिकै ‘काठमाडौंको कर्णाली’ भनेर चिनिने गाउँ हुन्– शंखरापुर नगरपालिकाका घुमारचोक र लप्सेफेदी ।
हुन त यी नगरपालिकाभित्र पर्छन् । तर एउटा नगरमा हुनुपर्ने सेवासुविधा यहाँ छैनन् । प्राकृतिक हिसाबले रमणीय यस क्षेत्रमा तामाङ समुदायमा यातायात, खानेपानी र स्वास्थ सेवाको अभाव छ । घुमारचोकको यस्तै जनजीवनलाई वनदेवी आधारभूत विद्यालयका विद्यार्थीले ‘बर्दाे मोन्लाम’ नाटकमार्फत राजधानीबासीलाई देखाए । विद्यालयका लागि आवश्यक शैक्षिक सामग्री किन्ने खर्च जुटाउन उक्त नाटक गत साता बत्तिसपुतलीस्थित शिल्पी थिएटरमा तीन दिन मञ्चन गरियो । बालबालिकाले सरल विषयवस्तुमा तामाङ बस्तीका अनगन्ती पाटाहरू उजागर गरिदिए । १० दिने नाट्य कार्यशालापछि निर्देशक अनिल सुब्बाले विद्यार्थीलाई मञ्चमा उतारेका थिए ।
नाटकमा ८ कक्षामा पढ्ने अस्मिता तामाङले आमाको भूमिका निभाइन् । छोरा साह्रै बिरामी हुन्छ । तर अन्धविश्वासका कारण उसलाई अस्पताल नलगी झारफुक गर्न लगिन्छ । अस्मिताका अनुसार यो उनकै गाउँको कथा हो । अहिले पनि उनको गाउँमा कोही बिरामी भयो भने सिकिस्तै नभई अस्पताल ल्याउने चलन छैन । ‘स्वास्थ्य चौकी पुग्न दुई घण्टा लाग्छ,’ उनले भनिन्, ‘काठमाडौं ल्याउन बाटोको समस्या छ ।’ अस्मिताको यो पहिलो थिएटर अनुभव हो । पहिलोपटक थिएटरमा नाटक गर्दै आफ्नो समाजको कथा देखाउन पाउँदा खुसी लागेको उनले सुनाइन् ।
बिहान उठ्नेबित्तिकै कोदो रोप्न जानु, पानी ल्याएर खाना पकाउनु, गाईभैंसीलाई घाँस काट्नु, घरायसी काम सकेर विद्यालयमा पढ्न पुग्नु अहिलेको दैनिकी हो अस्मिताको । उनको घरबाट विद्यालय पुग्न एक घण्टा उकालो चढ्नुपर्छ ।
उनी आफ्नो विद्यालयमा पनि राम्रो डेस्कबेन्च होस् भन्ने चाहन्छिन् । ‘डेस्कबेन्च पुरानो भइसके, दिनभर बसेर पढ्न गाह्रो हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘हाम्रो विद्यालयमा पनि पत्रपत्रिका र राम्रा पुस्तक आइदिएहुन्थ्यो ।’ ८ कक्षामै पढ्ने भीममाया मोक्तान पनि एक घण्टा उकालो चढेर विद्यालय आइपुग्छिन् । यातायात मात्रै होइन, उनको गाउँमा खानेपानीको पनि अभाव छ । ‘खानेपानीको धारा पुग्न घरबाट आधा घण्टा तल झर्नुपर्छ, कहिले हप्ता दिन त कहिले एक महिना पानी आउँदैन,×’ उनले भनिन्, ‘कैयौं हप्तासम्म नुहाउन पाइन्न ।’
१४ वर्षीया भीममायाका बुवाको उमेर ६० नाघिसकेको छ । ‘तैपनि छोराछोरीको भोको पेट भर्नुपर्छ भन्दै अरूको घर बनाउन जानुहुन्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘त्यो देख्दा मलाई रुन मन लाग्छ । यो मान्छेको उमेर किन बढ्दै जान्छ ? किन बूढो हँुदै गएपछि काम गर्न सक्दैन ? म ठूलो नभएसम्म मेरो बुवा वृद्ध नहुनु भए पनि हुन्थ्यो नि ।’ उमेर ढल्के पनि बुबाले दुई छोरा र दुई छोरीलाई समान रूपमा पढाउनुभएकोमा उनी खुसी छिन् ।
गतवर्ष सिम्लेका बालबालिकाको नाटक देखाएर तारिफ बटुलेका अनिलले यस वर्ष घुमारचोकका विद्यार्थीलाई सिकाउन पाउँदा खुसी लागेको बताए । ‘काठमाडौंकै नजिक पनि त्यस्तो विकट ठाउँ रहेछ । त्यो गाउँ पुग्दा मलाई बत्तीमुनिको अँध्यारो जस्तै लाग्यो,’ उनले भने, ‘उनीहरूबाटै कथा सुनेर उनीहरूकै भोगाइलाई नाटकमा उतारेको हँु ।’ त्यहाँका बालबालिकाले राम्ररी नेपाली बोल्न र बुझ्न नसक्ने भएकाले कतिपय अवस्थामा शिक्षिकाहरूमार्फत आफ्ना कुरा विद्यार्थीलाई बुझाउनुपरेको उनले बताए ।
नाटकमा छोराको भूमिका निभाएका निरोज घिसिङ भविष्यमा इन्जिनियर बन्न चाहन्छन् । ‘मिलेसम्म इन्जिनियर बनेर मेरो गाउँसम्म पुग्ने बाटो बनाउनुछ,’ उनले भने, ‘त्यो सफल हुन सकेन भने चेतनामूलक नाटक गरेर गाउँमा रहेको अन्धविश्वास हटाउने कोसिस गर्नेछु ।’
विद्यालयका लागि आवश्यक डेस्कबेन्च, चार्ट, ग्लोब, ल्याब, गार्डेन, खानेपानी, खेलकुद लगायतको व्यवस्था गर्नका लागि नाटक मञ्चनमा ल्याएको विद्यालयका प्रधानाध्यापक बुद्धिबहादुर तामाङले जनाए । नाटकमा गौरी थिङ, दीपक घिसिङ, कलम वाइबा, विनोद च्याङ्बो, सोमराज घलान, सुदीप स्याङ्बो, मेन्लो घलान, सुस्मिता घलान, मनीषा घलान, अमिशा लामा, सुजिता घलान, सुमित्रा मोक्तान र अस्मिता वाइबाले पनि अभिनय गरेका थिए ।
श्रावण ६, २०७५ विमल खतिवडा
काठमाडौँ — खोटाङको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका ७ का सुशील गिरी ९ वर्षका भए । उनी हलेसी महादेव मन्दिरका पुजारी हुन् । तर मन्दिरका एक जना मात्र पुजारी होइनन् । एक मूल पुजारी र उनकै ठूलो बुवाको छोरा ८ वर्षीय सुदिन गिरी पुजारीका रूपमा छन् । बढी समय सुशील नै मन्दिर पुग्छन् । उनलाई बिहान/बेलुका मन्दिरसम्म लग्ने काम काका कमल गिरीले गर्छन् । कमल पनि पहिला मन्दिरमा बाल पुजारीको रूपमा काम गर्थे ।
सुशील बिहान ५ बजे उठ्छन् । जाडो होस् वा गर्मी । नुहाइधुवाइ गर्छन् । ननुहाई मन्दिर जान पाइँदैन । नुहाएपछि उनी मन्दिर जाने पोसाक पहेंलो कुर्थासुरुवाल लगाउँछन् । ६ बजे अनिवार्य रूपमा मन्दिर पुग्नुपर्छ । मन्दिरमा पुजारीका रूपमा काम गर्न थालेको वर्षदिन भयो । उनले १४ वर्ष नपुग्दासम्म मन्दिरमा पुजारीको रूपमा काम गर्नुपर्छ । सुशील सयोगीको भरमा मन्दिरमा चोखो पानी ल्याउँछन् । त्यसपछि धूप लगाउँछन् । चम्मर हल्लाउँछन् ।
पूजा गर्छन् । उनलाई पूजा गर्न मूल पुजारीले सिकाउँछन् । उनी र सुदिन हलेश्वर इंग्लिस बोर्डिङ स्कुलमा कक्षा ३ मा पढ्छन् । सुशीलले जे गर्छन्, सुदिनले पनि त्यही गर्छन् । दुवै जना एकैसाथ उपस्थित हुँदा मिलेर पूजा गर्छन् । स्कुलबाट आएपछि पहिला खाजा खान्छन् । त्यसपछि हातखुट्टा धोएर मन्दिर जान तयार हुन्छन् । ‘रमाइलो लागेको छ,’ सुशील भन्छन्, ‘पढाइ बिग्रिएको छैन, पढ्नलाई पैसा पनि पाएको छु ।’ उनी र सुदिनले मासिक रूपमा ५/५ हजार पाउँछन् । पूजा ३० मिनेटसम्म हुन्छ । त्यसपछि उनी घर जान्छन् ।
पुजारी भएपछि उनलाई चिन्ने धेरै छन् । स्कुल जाँदा सबैले माया गर्छन् । घरगाउँमा उनी पुजारी भएसँगै सेलेब्रिटी बनेका छन् । मन्दिरमा उनीसँग फोटो खिच्न भक्तजनबीच प्रतिस्पर्धा नै चल्छ । ‘सबैले माया गर्नुहुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले त सानै उमेरमा ठूलो मान्छे भएजस्तो भएको छ ।’
यो मन्दिरमा विसं. १८६१ बाटै बाल पुजारी राख्न थालिएको कमल बताउँछन् । बाल पुजारीलाई मन्त्र र पूजा गर्ने विधि सिकाएर मन्दिरमा पठाउने गरिएको छ । कसले पूजा गर्ने भन्ने विषयमा विवाद भएपछि मन्दिर व्यवस्थापन समितिले सातदिने सूचना निकालेर बाल पुजारीको खोजी गर्ने गरेको छ । सूचना उल्लेख गरिएको नियमभित्र जो पर्छ, उही मन्दिरको पुजारी बन्छ । हलेसी मन्दिरको पुजारी भनेपछि सबैले सम्मान गर्छन् । छुट्टै मान/मर्यादा हुन्छ । भक्तजनले गुरु भनेर माया गर्छन् ।
प्रकाशित : श्रावण ६, २०७५ ०९:०३